Portugal chọrọ ndị njem nleta na Britain n'oge na-adịghị anya iji mee ka mgbake akụ na ụba mee ngwa ngwa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmelite nke Njem njem » Portugal chọrọ ndị njem nleta na Britain n'oge na-adịghị anya iji mee ka mgbake akụ na ụba mee ngwa ngwa
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • Akụkọ na -agbasa ozi na Portugal • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa • Akụkọ dị iche iche
Portugal A na-eme atụmatụ ịnye 'akwa ikuku' maka ndị njem Britain ka ha gafee iwu mkpuchi iche. Ebumnuche a ga-anabatakarị site na ebe ndị ọzọ na Portugal na-adabere nke ukwuu na njem UK dị ka Algarve. Na 2019, UK bụ ahịa nke abụọ kachasị ukwuu na Portugal mgbe Spain gasịrị, yana nleta nde UK 2.9.
Dabere na ndị ọkachamara njem 'Covid-19 amụma, ndị mbata UK na Portugal ga-eto na mmụba kwa afọ (YOY) nke 3.1% na 2020. Amụma COVID-19 ugbu a na-atụ anya mbelata YOY nke -34% na 2020. Na 2018, onyinye nke njem na njem gaa GDP nke Portugal dị ihe dịka 19%. Thegba ọsọ nke ndị ọbịa UK na Portugal bụ nnukwu ihe kpatara na njem na njem na-arụ ọrụ ugbu a dị ka isi ihe na-enye akụ na ụba mba ahụ.
Ihe dị mgbagwoju anya ugbu a maka ndị njem UK nwere ma ọ bụ chọọ ide akwụkwọ ezumike na Portugal na ọnwa ndị na-abịanụ bụ na gọọmentị UK ka ga-ekpughere nkọwa akọwapụtara mgbe a ga-ewebata usoro iche iche, otu ọ ga-esi rụọ ọrụ na ogologo oge ọ ga-eme ikpeazụ. Iwebata usoro iche iche ga - enwe mmetụta dị ukwuu na njem njem na mbata na njem na UK.
Àkwà mmiri ikuku nwere ikike ịkwụsị ụfọdụ mmebi nke COVID-19 mepụtara n'ofe mpaghara ndị njem na Europe. Agbanyeghị, gọọmentị mba dịka mkpa nke Portugal iji nlezianya nyochaa ma ọ dị mma ịme. Uru akụ na ụba nke ikuku ikuku n'etiti UK na Portugal ga-abụ nnukwu, mana njem mba ụwa na-abawanye ohere nke ebili mmiri nke abụọ na ọrịa.
Na ngwụcha, gọọmentị UK kwesịrị ikwenye atụmatụ ya maka njem mba ụwa n'oge ejiji. Ngwa ngwa a na-eme ya, ọ ga-eme ngwa ngwa ka ndị niile na-ahụ maka njem nlegharị anya tinye aka na njem nlegharị anya UK. Ruo oge ahụ, ndị njem njem dịka nke Portugal ga-aga n'ihu na-enwe nsogbu n'ihi ejighị n'aka.